Muxuu Ibrahimovic ka yiri dhibaatada heysata Jose Mourinho? | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Muxuu Ibrahimovic ka yiri dhibaatada heysata Jose Mourinho?
Muxuu Ibrahimovic ka yiri dhibaatada heysata Jose Mourinho?
Posted by: Ahmed Haaddi October 10, 2018
Muqdisho – Wareysi uu siiyay Daily Mirror, Weeraryahanka Los Angeles Galaxy iyo bartilmaameedka AC- Milan ayaa daafacay tababarihiisii hore ee Jose Mourinho, kaasi oo booskiisa kooxda si aad ah loo xiriirinayo Zinedine Zidane, waxaana lagu soo waramayaa inuu bedel u yahay tababaraha reer Portugal.
“Jose waa midka ugu horeya dhammaan,sababtoo ah isagu waa guuleyste.Waxa uu sameynayaa wax walba oo uu ku guuleysan karo “ayuu yiri Ibrahimovic.
“Wuxuu ogyahay kubada cagta,wuu ogyahay sida loo akhriyo ciyaaraha, waxaana uu xakameyn karaa kulamada iyo maskaxda ciyaartoydiisa. Waxaan xusuustaa markii uu yimid Inter,wuxuu sameeyay qof walba in uu u ciyaaro 200%, ma ahan kooxda, laakiin isaga ayuu u ciyaaraa”.
Dadka jaahiliyaashu waxay ku hadlaan hab ku saleysan kibir, laakiin dhab ahaantii, waa kalsooni. Miyuu jiraa xukun ku saabsan waxa qofku ku guuleysan karo iyo kibirkii? Ayuu ugu danbeyn hadalkiisa kusoo xiray Ibro.
Previous: Maareyn ceynkee ah ayuu kaaga baahan yahay ganacsigaaga yar?
Next: Monaco oo shaqada ka ceyrisay macallin Leonardo Jardim